ESI EDOZI PLUGINS NA OPERA - OPERA - 2019
Opera Browser: Hazie plugins
Nkwekọrịta na ọrụ nke WhatsApp emeela ka onye ozi ahụ jupụta ebe niile na ngwa ngwa nke ndị na-ege ya ntị. N'ime ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ nke usoro ahụ, e nwere ndị nwere mkpa dị iche iche, ya mere ngwa ngwa cross-platform na-eji nweta ohere nnyefe ozi site na ọrụ bụ uru bara uru. N'okpuru ebe a, anyị ga-eleta WhatsApp maka Windows - ụdị ihe mgbakwunye na ndị ahịa Vatsap maka gam akporo na / ma ọ bụ iOS, nke, tinyere nke ikpeazụ, na-eburu ọnọdụ dị ùgwù na ndepụta nke ngwaọrụ eji eme nkwurịta okwu site n'aka ọtụtụ ndị ọrụ Ịntanetị.
Vatsap maka Windows abụghị ngwá ọrụ dị iche iche maka ịkekọrịta ozi na Intanet, kama ọ bụ enyi nke nsụgharị mobile nke onye ozi ahụ. Ma n'otu oge ahụ, ngwa ahụ bụ ngwá ọrụ kachasị mkpa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịnyefe ozi ederede nke nnukwu olu na ụdị faịlụ dịgasị iche iche site na iji ọrụ WhatsApp.
Nwekọrịta na nsụgharị mobile
N'okpuru ya, WhatsApp maka Windows bụ "mirror" nke ngwa ngwa ndị ngwa na arụnyere na arụ ọrụ na ama onye ọrụ ma ọ bụ mbadamba, nke na-arụ ọrụ n'okpuru njikwa nke mobile OS. Na enweghị nsụgharị Vatsap na-arụ ọrụ na nke a na-arụ ọrụ, nsụgharị desktọọpụ nke onye ozi agaghị arụ ọrụ! Ihe kpatara a na-akpata ọtụtụ mkpesa na ọ dịghị mfe, mana ndị a bụ ihe nchebe maka nnyefe data. Ndị ahịa ahụ jikọtara site na ịgụpụta QR koodu site na kọmputa na-eji igwefoto nke ngwaọrụ mkpanaka.
Mgbe ị kwadoro njikọ dị n'etiti WhatsApp na smartphone (PC mbadamba) na ngwa Windows nke ngwa ahụ, data niile agbakwunyere usoro ahụ ma bufee ya na ya ga-emekọrịta. Usoro anaghị ewe oge dị ukwuu, a na-edekwa ozi ahụ site na ngwaọrụ mkpanaka na kọntaktị zuru ezu, akụkọ ozi, ntọala profaịlụ, wdg.
Izi ozi na ndị ọzọ nke ọrụ ahụ bụ ọrụ isi nke Vatsap maka Windows. Ozugbo enwere ike ịchọta interface n'etiti desktọọpụ na nsụgharị nsụgharị nke onye ozi ahụ, onye ọrụ ahụ nwere ike ịmalite ịme ya ozugbo.
Enweghi ike imebi windo nkata na ihe ndi na-achoghi mkpa, ma n'otu oge ahu enweghi oru - nke kachasi zuru oke nke nhọrọ di ugbu a ma ha na emejuputa atumatu site na echiche nke onye ahu. Dịka ọmụmaatụ, a na-eme n'ihu ma ọ bụ mmalite nke mkparịta ụka ọhụrụ site na ịpị aha ịkpọtụrụ n'akụkụ aka ekpe nke windo, na izipu ozi, jiri igodo ahụ "Tinye" na keyboard - ọ na-esiri ike ịchọta otu nzukọ dị mfe nke usoro mgbasaozi. Tinyere ihe ndị ọzọ, ndekọ na ntinye nke ozi ọdịyo dị na windo nke PC maka PC.
Kọntaktị, nkata ọhụrụ, otu
Enwere ike iji onye ọrụ nweta ndepụta nke kọntaktị na WhatsApp maka Windows. Ị nwere ike ịhụ ndepụta ma chọpụta àgwà achọrọ na ya site na ịpị bọtịnụ "Mkparịta ụka ọhụrụ".
Na bọtịnụ ahụ a kọwara n'elu na-enye ohere ịnweta nzukọ nke otu maka nkwurịta okwu na ọtụtụ ndị ọrụ nke ọrụ n'otu oge ahụ.
Ikekwe enweghi uzo di nma iji nye ozi ederede karia iji emoticons. Ihe ngwọta nke mbipụta a na WhatsApp maka Windows anaghị akpata nsogbu ọbụla. Mgbe ịpịsịrị bọtịnụ kwesịrị ekwesị, onye ọrụ ahụ achọtara nnukwu ọnụọgụ ngosi kachasị mma maka foto na-agbakwunye ozi ahụ. A na-ekezi otu ọchị ọchị n'ime ọtụtụ edemede, nke na-eme ka nchọta ọchụchọ ahụ achọrọ dị ukwuu n'oge ahụ.
Iche iche, ekwesịrị ịcheta ohere ị ga-eji meere onwe gị na onye ọrụ gị aka site na iziga gif-images, nke a na-ahọrọ site na nnukwu ọbá akwụkwọ.
Na mgbakwunye na ozi ederede, ụdị faịlụ nwere ike ibufe site na Vatsap. Naanị pịa bọtịnụ ahụ na mbido akwụkwọ ntanetị ma họrọ foto, vidiyo, ngwugwu egwu ma ọ bụ akwụkwọ na diski PC. A ga-enyefe faịlụ na interlocutor fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
Na mgbakwunye na ụdị faịlụ ndị dị n'elu, Vatsap maka PC na-enye gị ohere ịnyefe ihe oyiyi site na kamera weebụ, yana kọntaktị site na ndepụta agbakwunyere onye ozi ahụ.
Ịkwado mkparịta ụka
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mkparịta ụka na-emeghe na listi kwekọrọ na windo nkata nwere ike ịkpata nsogbu ụfọdụ mgbe ị na-achọ nkata ziri ezi. Iji zere ọnọdụ a, ndị mmepe nke WhatsApp maka Windows etinyewo ngwá ọrụ ahụ na nhọrọ ndị na-enye ha ohere ịhazi nkwurịta okwu.
Mkparịta ụka dị mkpa nwere ike ịbụ "Ịnọ ná Ntụkwasị Obi" na n'elu ndepụta ahụ, na mkparịta ụka ndị a na-anaghịzi eduzi, wepụ na listi anya "Nye Archive". Ma n'ezie, ọrụ ahụ dị nhichapụ kpamkpam nke akwụkwọ ozi na kọntaktị kpọmkwem.
Ntọala onye nhazi na ntanetị
Dị ka nsụgharị mobile nke WhatsApp, ụdị desktọọpụ na-enye ike ịhazi profaịlụ gị. Ị nwere ike ịgbanwe avatar, nke ndị ọzọ na-ahụ maka aha ọrụ ahụ ma debe ọnọdụ.
Banyere ọdịdị nke ngwa ngwa, ebe a na - enweghị ike ịmepụta omenala - ọ bụ naanị mgbanwe na ndabere nke mkparịta ụka dị.
Akụkụ nchebe nke ozi nzuzo ndị ebute site na Ịntanetị na-eche ọtụtụ ndị ọrụ ozi. N'ebe a, a ga-ahụta na mgbe ọrụ Vatsap na-agba ọsọ, ezoro ezo njedebe nke ozi onye ọrụ niile, gụnyere faịlụ ezitere, na-eji ya, ndị na-akparịta ụka nwere ike ịtụle ozi ndị a na-echekwa nke a ga-echebe site na anya.
Ọhụụ nke Russia na oge a dị mfe;
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkparịta ụka ozugbo nke akụkọ ihe mere eme nke ụlọ nkata na ndị dị iche iche nwere ngwaọrụ mkpanaka.
Iji malite ma rụọ ọrụ ahụ, ị ​​chọrọ onye ọrụ na-agba ọsọ na ngwaọrụ mkpanaka onye ọrụ;
Enweghị ike ịme oku na vidiyo;
Enweghị nkwado maka Windows n'okpuru version 8.
WhatsApp maka Windows bụ ihe mgbakwunye na-aga n'ihu na Vatsap na ngwaọrụ mkpanaka nke onye ọrụ. Ngwá ọrụ ngwanrọ na ngwanrọ a maara nke ọma na ngwa ọrụ ahụ na-agbasawanye ihe nlereanya nke iji otu n'ime ozi ngwa ngwa kachasị amara.
Download whatsapp maka windo n'efu
Whatsapp maka gam akporo Esi edeba aha na WhatsApp na Android-smartphone, iPhone na PC Anyị na-eziga vidio vidio na WhatsApp Olee otú iji wụnye whatsapp na laptọọpụ
WhatsApp maka Windows bụ ụdị nke ozi ozi e-mail nke aha ahụ ahaziri iji hazie njirimara iji nweta ọrụ nke ọrụ ndị kasị ewu ewu na kọmputa na kọmpụta.
Sistemụ: Windows 8, 8.1, 10
Ụdị: Ndị ozi Windows ozugbo
Onye Mmepụta: WhatsApp Inc
Otu esi eme VKontakte a mechiri emechi
Mmemme iji gbanyụọ kọmputa na oge
Windows Local Group Policy Editor maka Beginners
Nbudata vidiyo site Mail.ru
Ngwá Ọrụ Nchịkọta na Photoshop
Otu arịlịka na MS Word bụ akara nke gosipụtara ebe ihe na ederede. Ọ na-egosi ebe a gbanwere ihe ma ọ bụ ihe ndị ahụ, na-emetụta àgwà nke ihe ndị a dị na ederede. A pụrụ iji arịlịka dị na Okwu tụnyere otu aka dị na azụ nke etiti maka foto ma ọ bụ foto, na-enye ya ohere ka ọ dịrị na mgbidi. GụKwuo
Nsogbu Skype: ihe omume ahụ anaghị anabata faịlụ